दैनिक पत्रका सबै इन्फोटेक
चिनियाँ कम्पनी हुवावेले गत हप्ता आफ्नै स्मार्टफोन अपरेटिङ सिस्टम सार्वजनिक गरी प्रविधि क्षेत्रमा हलचल पैदा गरेको थियो । हुवावेको यस अपरेटिङ सिस्टमले गुगलको एन्ड्रोइडलाई टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ । आवश्यक परेको बेला हुवावे...
फेसबुकले बनाउँदैछ नयाँ सफ्टवेयर, मान्छेले जस्तै सोँचेर अनुवाद गर्ने
सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुकले विश्वका आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि भाषाको बन्देज तोड्ने अभियानमा जुटेको छ र यसका लागि मानिसले सामान्य बोलिचालीमा प्रयोग गर्ने जस्तै भाषाको सटिक अनुवादको सुविधा दिने तयारी गरिरहेको छ । ...
ओप्पो आर ९ एस स्मार्टफोन बन्यो विश्वमै सर्वाधिक लोकप्रिय मोडल
काठमाडौं । सन् २०१७ को पहिलो त्रैमासमा सर्वाधिक बिक्री हुन सफल एण्ड्रोइड स्मार्टफोन कुन हो ? धेरैको जवाफ सामसुङ, एलजी, हुआवे वा सियोमी हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । ...
तपाईंको बच्चाले पनि स्मार्टफोन खेलाइरहन्छ ? सावधान !
यदि तपाइँको बच्चाले स्मार्टफोनमा खेलिरहने लत बसालेको छ भने सतर्क हुनुहोस् । बच्चाको यो आदत उसको निद्राको सत्रु हो । वैज्ञानिकहरुको एक शोधमा यो पत्ता लागेको छ की जो बच्चा स्मार्टफोन वा ट्याबलेटमा धेरै समय...
यसरी पत्ता लगाउनुस् आफ्नो स्मार्टफोनको भाइरस
एन्ड्रोइड विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा आएको अपरेटिंग सिस्टम हो । दुनियामा १ अर्ब भन्दा धेरै एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता छन् ।यी प्रयोगकर्तालाई आफ्नो जालमा पार्नका लागि ह्याकरहरुले नयाँ नयाँ टि्रक्सको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् जसबाट प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो...
क्यान मेला भोलिदेखि
बुटवल । भोलीदेखि बुटवलमा क्यान इन्फोटेक हुदैछ । क्यान महासंघ र क्यान महास‌ंघ रुपन्देहीको अायोजनामा मेला हुन लागेको हो । बुटवल मण्डपमा हुने मेलाको तयारी पूरा भएको छ । प्रेस विज्ञप्ती क्यान महासंघले विगत २४ वर्ष...
बुटवलमा कम्प्युुटर व्यवसाय फस्टाउँदो छ
आइटीको हब नै मानिने रूपन्देहीमा दिन प्रतिदिन यसको व्यवसाय पनि बढ्दो छ । केही वर्ष अगाडि १० –१५ वटा कम्युुटर तथा ल्यापटप पसल रहेको रूपन्देहीमा हाल भने ६० देखि ६५ वटा पुुगिसकेका छन् । ...
वाईफाई अर्कोले चोरेर प्रयोग गर्दा हुने नोक्सानहरू
सुरुमा आफ्नो वाईफाई राउटरमा नजर लैजानुहोस् । राउटरमा केही लाइट बलिरहेका हुन्छन् । यी मध्ये एउटा वायरलेस कनेक्टिभिटीको हुन्छ । वाईफाई चोरी भएर नभएको पत्ता लगाउन सबै वायरलेस डिभाइस बन्द गर्नुहोस् ।...
मोबाइल पुरानो भो ? एकछिन यो पढ्नुस्
ग्याजेट्सको प्रयोग गर्ने सोख आजभोलि सिर्फ युवाहरुमा मात्र सीमित छैन । हरेक उमेरका मानिसहरु यसको प्रयोग गर्छन । कसैलाई यसको जरुरी छ भने कसैलाई प्रयोगको लत लागेको छ........
विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा यसरी करेन्ट लाग्दैन
विद्युतीय सबस्टेसनबाट टाढै रहनुपर्छ । विद्युतीय सबस्टेसनको वरिपरि रहेका रुख, पर्खाललगायतमा चढ्नु हुँदैन । हिँड्ने बाटोमा विद्युतीय तार झरेको देखिएमा अभिभावकलाई वा विद्युत् प्राधिकरणमा खबर गर्न लगाउनुपर्छ...
आइफोन पाउन आफ्नो नामै आइफोन राखे एक युवाले
आइफोन बोक्ने चाहना कसको पो नहोला र तर आइफोन पाउनकै लागि युक्रेनका एक व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक नाम परिवर्तन गरी ‘आइफोन सेभेन’ राखेका छन् ।...
एप्पलले कहिल्यै नसोचिएको विशेषतासहित सार्वजनिक ग¥यो नयाँ ल्यापटप
यसमा एकदम नयाँ डिजाइन दिइएको छ जसको चारैतर्फ एल्मुनियम र धातु लगाइएको छ । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा पातलो र हलुका म्याकबुक हो । यो १३ र १५ इन्चको दुई प्रकारमा सार्वजनिक भएको छ भने...